Archive du 20180802
Vahoakan’Atsimo Atsinanana “Mila an’i Dadavalo izahay”
Nihazo an’Ankaramalaza hiatrika ny isan-kerintaona faha-77 any amin’ny Toby FLM any an-toerana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, izay nigadona tao Manakara omaly.
Fianakaviamben’ny antoko TIM boriborintany faha-6 Nanatanteraka didimpoitra faobe ho an’ireo sahirana
Zanaky ny faritanin’i Fianarantsoa Miahiahy amin’ny fifandraisany amin’ny fitondrana ankehitriny
Tsapan’ny andiana raiamandreny avy any amin’ny faritanin’i Fianarantsoa ankehitriny ny fivadihan’ny fitondrana amin’izy ireo noho ny antony maromaro.
Poule des As « Thb League 2018 » Fosa Juniors sy Cnaps Sport no hisantatra azy
Ny lalaon’ny Fosa Juniors Boeny sy ny Cnaps Sport Itasy hotontosaina any Mahajanga no hisantatra an’ireo lalao Poule des As amin’ny
Edito Samy mahay kobaka
Omaly no andro voalohany nahafahan’ireo te ho lasa filoham-pirenena rehetra nametraka ny dosie mameno ny fepetra maha kandida handray anjara amin’ny firotsahan-kofidiana ho filoham-pirenena azy avy teny amin’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana.
FIER MADA andiany faha-20 Ahitana mangahazo milanja 50 kg ny iray fototra
Nosokafana omaly teny amin’ny village Voara Andohatapenaka ilay Fier Mada andiany faha-20 hivarotana sy hampirantiana ireo karazam-bokatry ny tantsaha manerana ny Nosy.
Fanjifanana Be mpitady ny vokatra AAA TIKO
Mitady hatrany ireo vokatra vokarin’ny orinasa AAA TIKO ireo mpanjifa manerana ny Nosy, indrindra taorian’ny nanakatonan’ny fitondram-panjakana ny orinasa Magro.
Omaly dia nitety fokontany tao amin’ny boriborintany faha 5 ny depiote Clarisse Rasendrandrazana ary niresaka tamin’ireo vahoakany toy ny teny amin’ny toby fanasan-damba sy ny tsena.
NIAKATRA NY SOLIKA
Niakatra 4100 Ariary indray ny solika, 3450 Ariary ny gazoala ary 2650 Ariary ny solitany omaly.